10 yakanakisa 2-in-1 shampoos uye ma conditioner
[ad_1] Uri mumwe wevaya vanogara vachimhanya mangwanani here? Iwe unovenga here kumirira iyo conditioner kuti inyurwe mushure mekushambidza bvudzi rako? Kana zvirizvo, rombo rakanaka kwauri, kune matani ezvigadzirwa zvekuchengetedza bvudzi kunze uko zvinonatsa nekugadzirisa bvudzi rako panguva imwe chete. You… Ramba kuverenga 10 yakanakisa 2-in-1 shampoos uye ma conditioner
Yakakamurwa se runako
10 nyeredzi runako vakadzoka mushure mekureruka
[ad_1] NSW Sei Alison Porter akanyangarika kubva kumascreen mushure mekubudirira kwaCurly Sue, chii chakaitwa naSvetlana Loboda paakasiya boka reVIA GRA, uye Andie MacDowell akakwanisa sei "kudzidzisazve" kubva kune mutambi kuenda kumuenzaniso? 10 nyeredzi runako vakadzokera mukurumbira mushure mekureruka. Svetlana Loboda “Vanhu vese… Ramba kuverenga 10 nyeredzi runako vakadzoka mushure mekureruka
5 face serum ndichatenga futi
[ad_1] BKutenda kune izvi zvigadzirwa, ini ndakarega kufunga nezve hwaro muhupenyu hwezuva nezuva, ndakatora husiku husiku husina hanya (pasina ganda rine mafuta mangwanani), ndakakanganwa nezvekupururudza uye kazhinji ndakarerutsa maitiro angu ezuva nezuva kunaka sezvinobvira - kana imwe ye marapirwo ako ndeye seramu yechiso, zvimwe zvese zvinotevera. Zvese… Ramba kuverenga 5 face serum ndichatenga futi
ko amai vedu kirimu anotaridzika sei izvozvi?
[ad_1] BAchromin brand inozivikanwa kune wese munhu akambofarira dambudziko rekujekesa ganda. Uye kana kamwe kamwe iwe usati wanzwa nezvake, bvunza amai vako - ivo vanoziva zvechokwadi. Kirimu chete yezera mavara Achromin, iyo yaishandiswa nevakadzi muUSSR, yakagadzirwa neBulgaria… Ramba kuverenga ko amai vedu kirimu anotaridzika sei izvozvi?
35 vatambi vechikadzi vakanaka kwazvo munguva yedu
[ad_1] HFamous gymnast vanozviita mushure mekupera kwebasa ravo remitambo, uye mutambi wenhabvu akanaka kwazvo muRussia anotaridzika sei? Chikamu chekupedzisira chechinyorwa nezvevasikana vakanaka mumitambo. Yekutanga neyechipiri verenga izvo zvikamu pane zvinongedzo. Margarita Mamun Margarita Mamun kanomwe akave shasha yenyika… Ramba kuverenga 35 vatambi vechikadzi vakanaka kwazvo munguva yedu
5 zvigadzirwa zvebvudzi zvandinotenga ndadzokororazve
[ad_1] PAMASHURE shampoo, shimmer yekunyora pfapfaidzo, midzi yekukwiza mousse nezvimwe zvigadzirwa zvandinoshandisa kudonha rekupedzisira. Sofia Vorobyova BeautyHack Edhi Shampoo yekuwedzera vhoriyamu kubvudzi Yakawedzera Vhoriyamu Shampoo uye inotsvedzerera inogadzirisa Smoothing Conditioner, Moroccanoil Iyo Israeli mhando Moroccanoil yanga ichichengetedza bvudzi rangu kubva pakuoma uye kutonhora kweanenge makore matatu.… Ramba kuverenga 5 zvigadzirwa zvebvudzi zvandinotenga ndadzokororazve
40 chena nzara polish manicure mazano
[ad_1] makumi mana machena chipikiri manicure mazano [ad_40]
8 akanakisa mabasa aAngelina Jolie
[ad_1] V Pakutanga kwebasa rake, mukadzi akanaka kwazvo pasi rese, sekureva kwemagazini yeVanity Fair, pachinzvimbo chemadhirezi eBlack tii, aifamba bhurukwa reganda pamakapeti matsvuku. Iwo mabhaisikopo mumamuvhi aive akakodzera: Gia - fashoni modhi ine isina kugadzikana psyche, zvine hasha Lara Croft, mwana Kate ... Ramba kuverenga 8 akanakisa mabasa aAngelina Jolie
20 sarudzo dzemanicure dzinorebesa nzara dzako
[ad_1] 20 sarudzo dzemanicure dzinorebesa nzara dzako [ad_2]
10 chokwadi chausina kuziva nezvaElizabeth II
[ad_1] TOQueen weGreat Britain ndiye akareba kutonga pakati pevapenyu. Chikunguru yakaratidza makore makumi matanhatu nemashanu ekugadzwa kwake. Munguva iyi, Elizabeth II akakwanisa kupindura tsamba mamirioni 65, kusvika pakuziva vanapapa vanomwe uye nekuisa pamwechete muunganidzwa wemaketi zviuru zvishanu. Izvo zvinonyanya kufadza chokwadi nezve mambokadzi zviri mu… Ramba kuverenga 10 chokwadi chausina kuziva nezvaElizabeth II
Nyeredzi makumi maviri vanopfeka magirazi asi iwe wanga usingazvizive
[ad_1] D Kune kapeti tsvuku, ivo vanosarudza lenzi, uye munguva yavo yemahara kubva kutora mafirimu uye zviitiko zvemagariro, vanodada vanopfeka magirazi ekunyorera. Mukusarudzwa kwakasarudzika kweBeautyHack kune nyeredzi dzisingatyi kunzi "mana-maziso". Nditende, rondedzero yacho inogona kutonyanya kuda kana vanhu vazhinji vakakurumbira vasina ... Ramba kuverenga Nyeredzi makumi maviri vanopfeka magirazi asi iwe wanga usingazvizive
Mira! 8 bvudzi rakatarwa zvinotyisa
[ad_1] Mira! 8 bvudzi rakakura zvinotyisa [ad_2]
15 yeBrazil TV inoratidza iyo yakaputsa marekodhi maererano nemaonero
[ad_1] Kubva "Varanda veIzaura" kuenda ku "Tarisiro yeBrazil"! On BeautyHack - akanakisa eBrazil TV akateedzana kwemakore makumi matatu nemasere, ayo akatepfenyurwa muRussia. "Muranda Izaura" Nyaya dzakateeranwa musi waGumiguru 36, 11. MuUSSR, "Muranda Izaura" yakaratidzwa muna 1976 chete - yaive yekutanga sipo opera paterevhizheni yeSoviet.… Ramba kuverenga 15 yeBrazil TV inoratidza iyo yakaputsa marekodhi maererano nemaonero
20 echinyakare magadzirirwo ebvudzi rakanaka
[ad_1] BeautyHack yakanyora sarudzo yemabudiriro evakakurumbira avo vakagara nhaka tambo dzakatetepa. Uye stylists uye trichologists vakaudza maitiro ekuchengeta rakadai bvudzi uye zvinorevei kuita dhizaini. Vyacheslav Gordeev Wepamusoro stylist weNikolskaya Kirabhu saloni Inemvura Imbwa Cocktail Beach Spray, Evo inondibatsira kushandura bvudzi rakatetepa kuva rakakura… Ramba kuverenga 20 echinyakare magadzirirwo ebvudzi rakanaka
5 akanakisa kumeso mapoda maererano nevaverengi veBeautyHack
[ad_1] NEfunds kubva ku799 kusvika ku4,000 rubles, iyo vaverengi veBeautyHack vanga vachishandisa kwemakore mazhinji! Yakakwana poda Prisme Visage, Givenchy Natalia Mikhalyuk-Nehme Makumi emakore apfuura, iyo Prisme Visage yekupaka inoshanduka, uye hupfu hunoramba huri hunodiwa nevasikana vazhinji. Ndichatanga nemagadzirirwo euyu anotengesa zvakanyanya munyika yezvishongedzo.… Ramba kuverenga 5 akanakisa kumeso mapoda maererano nevaverengi veBeautyHack
Chipfuva Mberi: 8 Nyeredzi dzakundikana Mammoplasty
[ad_1] Chipfuva Mberi: 8 Nyeredzi dzakundikana Mammoplasty [ad_2]
15 akanakisa sarudzo kubva kune nyeredzi
[ad_1] gumi nemashanu mazano kubva pakapeti tsvuku, akakodzera muhupenyu chaihwo. Makeup matipi emhizha akasanganisirwa! Hayley Bieber Luminous makeup, senge yaHailey, inozorodza ipapo ipapo, ichiita kuti ive yakakwana kune iro rakaomesesa bhizinesi Muvhuro. Makeup muimbi Ksenia Nikitina anopa zano kuti ushandise base Urban Kuora pasi pemumvuri. “Vanochengeta mumvuri zvakachengeteka kwemaawa makumi maviri nemana. I choose satin… Ramba kuverenga 15 akanakisa sarudzo kubva kune nyeredzi
Roman Moiseenko - angangoita matanhatu ekunyora zvikanganiso zvaunoita
[ad_1] ROman Moiseenko ndemumwe wevanozivikanwa nevhudzi uye stylist muRussia. Akashanda pamabasa akakura akadai se "Star Factory", "People's Artist", aive mubati weanobata chirongwa che "Bvisa Izvozvi" paSTS. Roman akaudza BeautyHack maitiro ekunyatso kuomesa bvudzi rako, nei uchifanira kuchinja kupatsanuka uye chii ... Ramba kuverenga Roman Moiseenko - angangoita matanhatu ekunyora zvikanganiso zvaunoita
masviriro andakaita bvudzi rangu uye kugadzirwa musalon muArt'Up
[ad_1] Gthe heroine webasa reBeautyHack Katya akapedza maawa akati wandei muSalon Art'Up kuPatriarch's Ponds, kwaakatora bvudzi idzva uye zvisina kujairika, mumanzwiro ake, makeup. Stylist Eldar Adraev uye art director weArt'Up make-up muimbi Alena Lapina vanotaura nezve kwavo kuyedza. Asati Mushure meEldar Adraev wepamusoro stylist weiyo Art'Up runako… Ramba kuverenga masviriro andakaita bvudzi rangu uye kugadzirwa musalon muArt'Up
Runako rweHackHack Zano reVhiki: Tora Bhati Yemunyu
[ad_1] HDo usaregere nguva yekuda kwakadai (kunyanya kune vagari veguta guru)! Kana iwe uchitonhora, wakaneta, wakakomberedzwa mukushushikana, inzwa kuti ganda raoma uye rakapfava, rakawandisa mukudzidziswa - geza uye shandisa waunofarira munyu. Kubva kune nyanzvi paBeautyHack - nhanhatu sarudzo dzakaratidza. Chekutanga,… Ramba kuverenga Runako rweHackHack Zano reVhiki: Tora Bhati Yemunyu
test drive yeasina kurwadziwa muviri kuumba maitiro
[ad_1] GBeautyHack Master Edhari Karina Andreeva akaenda kunorunako salon "Millefeuille» PaFrunzenskaya, akaedza kosi yemabatiro gumi emuviri pachishandiswa cheIcoon Laser chishandiso uye akagovana zvaakaona. Handisi kunyepa kana ndikati angangoita mukadzi wese nhasi anorota ane toni chimiro uye ane hutano ganda. Mumwe munhu ane rombo nemageneti,… Ramba kuverenga test drive yeasina kurwadziwa muviri kuumba maitiro
Kukura kunze pakarepo! Nyeredzi gumi dzisingaendi
[ad_1] Ha muti haugone chete kugadzirisa bvudzi rinofinha, asi zvakare nekuchinja kushanduka kwakaringana kwechiso. Uye kana mune yekutanga kesi paine mikana shoma yekukundikana, mune yechipiri zvese zvakanyanyisa kuomarara. Semuenzaniso, mabhanhire akatwasuka haakwanise vakadzi vane chiumbwa chakatarisana kumeso, mapfupi ano… Ramba kuverenga Kukura kunze pakarepo! Nyeredzi gumi dzisingaendi
33 echinyakare vhudzi rekusarudza pamberi pe33
[ad_1] TOcascading haircuts, bangs, mohawks, tsiva mabraids uye ponytails - chii chausati waedza izvozvi? Kwokuzviita: HAIRDRYER Dry Bar (Bolshaya Dmitrovka, 16/1, kero dzese dzinogona kutariswa pano) Mutengo pakuisirwa: 1 400 rubles. (kuruka), zviuru zviviri zvema ruble. (zuva nezuva), zviuru mazana matatu nemazana mashanu. ("Boogie Woogie"). Brow & Runako Bhawa (Bolshaya Dmitrovka, 2,000; Malaya Bronnaya,… Ramba kuverenga 33 echinyakare vhudzi rekusarudza pamberi pe33
Unoziva here? Kukura kwakaita magamba ekunamata TV akateedzana
[ad_1] Hit yakabva kuna Luisana Lopilato kubva kuRebel Spirit uye mumitambo ipi yeTV yaiti Claire Danes nyeredzi padivi naJared Leto? BeautyHack inoratidza izvo zvinozivikanwa zviri kuyaruka zvema90s nema2000s izvozvi. Mischa Barton (Marissa Cooper mumutambo weTV “OS - Lonely Hearts”) Chikamu chekutanga chezvakakurumbira zvakaburitswa… Ramba kuverenga Unoziva here? Kukura kwakaita magamba ekunamata TV akateedzana
6 akakwana matoni zvigadzirwa zvandinotenga kakawanda
[ad_1] RAre yakawedzera pores, kutsvuka, kutenderera pasi pemeso - matambudziko anozivikanwa? Zvinotora simba rakawanda uye mari kugadzira toni yakakwana. Ini ndinotaura nezvevandinofarira muchikamu "Kusvika pakadonha kwekupedzisira." Sofia Vorobyova BeautyHack Mupepeti Kugadzirisa kumeso kirimu CC Red, Erborian Chishamiso chinoshanduka kubva pagirini kuenda ku beige… Ramba kuverenga 6 akakwana matoni zvigadzirwa zvandinotenga kakawanda
15 vanozivikanwa vane tsiye dzakakwana
[ad_1] NST Chimiro chakasarudzwa-naka chetsitsi hachiiti chete kuti chioneke zvakanyanya kuvhurika, asi zvakare chinoumba zviyero zvakakodzera zvechiso. Mune ino kesi, akanakisa ekugadzira maartist mupasi anoraira kupokana nekutevera fashoni. Kunyangwe paine chokwadi chekuti dzakakura, tsiye dzakashata hadzisi kuenda "kusiya" pasi rose, fomu iri… Ramba kuverenga 15 vanozivikanwa vane tsiye dzakakwana
10 Angelina Jolie maTatoo iwe aunofanirwa kuziva nezvazvo
[ad_1] MHave nevana vatanhatu uye Mumiriri Wenyasha Angelina Jolie mutsigiri wematatoo. Iyo hieroglyph ye "kufa" ndiyo yaive yekutanga kuoneka pamuviri wemutambi. Mushure memakore akati wandei, Angie akaibvisa, achitsiva nechiratidzo cheBuddhist "Tai anonyengeterera kuchengetedzwa." Zvese "hunyanzvi" pane iyo stellar muviri ine… Ramba kuverenga 10 Angelina Jolie maTatoo iwe aunofanirwa kuziva nezvazvo
chii nyeredzi dzakagadzirira nekuda kwebasa?
[ad_1] V ane zera ripi Bella Hadid akawana rhinoplasty yake yekutanga, uye ndeipi nyika yakaunzwa naKylie Jenner pakuonekwa kwake kutsva? Nekuda kwemabasa matsva, zvibvumirano uye zvirongwa zvebhizinesi, nyeredzi dzakagadzirira jekiseni risingakuvadzi reBotox uye kuvhiya kwakakomba kwepurasitiki. Cher Cher ane makore makumi manomwe nemaviri ekuberekwa, uye kwehafu yeiyi… Ramba kuverenga chii nyeredzi dzakagadzirira nekuda kwebasa?
Ndiani asingaendi nekugera bvudzi pfupi
[ad_1] Zdid unoda kumutsiridza mufananidzo kana kuchinja mufananidzo? Tora nguva yako kuita zvisarudzo zvakakomba - shanduko mukugera musoro hazviwanzo kusangana nezvinotarisirwa. Kana iwe uine chishuwo chebvudzi pfupi, tanga waona kana kureba uku kwakakukodzera. BeautyHack ndeyekuti ndiani asingade bvudzi rakapfupika.… Ramba kuverenga Ndiani asingaendi nekugera bvudzi pfupi
Haugone kukanganwa kutenga? Wepamusoro gumi zvigadzirwa zvitsva zvevhiki
[ad_1] Fan uturistic mudziyo, maruva mvura yechiso, zvigamba - vanochengeta hunyoro uye zvimwe zvitsva zvevhiki rino zvinokodzera kutariswa kwako. Massager inopesana nemakwinya Massage Wrinkle Remover, MIZUHI Inobudirira, yakapusa, bhajeti - izvi zvese ndezve izvo zvitsva zveJapan zvigadzirwa zvemagetsi MIZUHI, izvo zvinogona kutengwa munguva pfupi yapfuura kuL'Etoile. Takataura nezve… Ramba kuverenga Haugone kukanganwa kutenga? Wepamusoro gumi zvigadzirwa zvitsva zvevhiki
Polina Gagarina nedzimwe nyeredzi dzeRussia dzakarasikirwa nehuremu hwakawanda
[ad_1] WITHport, kudya kwakakodzera kana kudya kwakasimba - chii chakabatsira Polina Gagarina, Svetlana Khodchenkova, Anastasia Denisova nedzimwe nyeredzi kupinda muchimiro? Polina Gagarina Pa "Star Factory" Polina haana kutaridzika sezvaari kuita iyezvino. Uye nyaya haisi yekuti ipapo akange asina bvudzi rekusayina uye platinum blonde. Ramba kuverenga Polina Gagarina nedzimwe nyeredzi dzeRussia dzakarasikirwa nehuremu hwakawanda
18 runako hacks kubva kuna trichologist uye stylist
[ad_1] ANDfich trichologist ane mukurumbira Tamara Berechikidze uye stylist Alexei Nagorskiy vanotaura nezve maitiro ekuchengeta bvudzi rako, chimiro chakatetepa uye chisina vhoriyamu, zvakasununguka zvakakombama kana tambo dzakareba dzinorema. Bvudzi refu gobvu Tamara Berechikidze Musarudzo yeMedical Sciences, dermatovenerologist-cosmetologist, trichologist 1) Kana uine bvudzi refu, rinorema, sarudza muzinga wemuti une muzinga wakanaka… Ramba kuverenga 18 runako hacks kubva kuna trichologist uye stylist
Nzira yekuvandudza sei ganda? Cosmetologist inopa zano
[ad_1] TAsya Al-Arabi, wepasi rose cosmetologist weDIBI Milano muRussia, akaudza maitiro ekuchengetedza ganda zvakanaka, chii chinonzi epidermal chipingaidzo uye kana zvichikwanisika kusimudzira kushanda kwekirimu. Asya Al-Arabi Mudzidzisi-cosmetologist wepasi rose kirasi DIBI Milano muRussia Tiudze nezve rakakodzera ganda kutarisirwa: sei kusarudza… Ramba kuverenga Nzira yekuvandudza sei ganda? Cosmetologist inopa zano
Maitiro ekuwedzera miromo nekugadzira: matipi kubva kune ekugadzira maartist
[ad_1] ZVINHU ndezvipi zviri mumuromo unobwinya, maitiro ekugadzira oombre, uye nzira yekudhirowa gwara nepenzura? Tsvaira miromo yako wobva waisa mumvuri wakawandisa wemiromo Lisa Eldridge Shandisa chikweshe chemuromo usati watanga kugadzira. Kiko's Scrub & Peel Inopukuta kwete chete kubvisa dzakafa ganda zvimedu,… Ramba kuverenga Maitiro ekuwedzera miromo nekugadzira: matipi kubva kune ekugadzira maartist
masks akanakisa ane zvigadzirwa zvemichero
[ad_1] NSapaya, watermelon, sitirobheri, apuro uye avocado haisi nzira yeiyo smoothie ine hutano uye kwete kana michero saladhi zvigadzirwa, asi vabatsiri vechokwadi kune avo vane ganda rinoda sos kupora uye hydration. Vagadziri veBeautyHack vakaedza masiki akanakisa nezvibereko zvemichero uye vakapa mutongo wavo. Kuenzanisa mask nemichero michero Fruit Balancing… Ramba kuverenga masks akanakisa ane zvigadzirwa zvemichero
Chikamu-chikamu dhizaini: 15 akanakisa nyeredzi mienzaniso
[ad_1] Yese tsvarakadenga wasp inokwanisa kugadzira chero kugerwa kuve kwakakodzera, uye kune varidzi vebvudzi rakatetepa haina nzvimbo zvachose. Heano akanakisa stellar mienzaniso yeanopatsanurwa-magadzirirwo ebvudzi uye maitiro ekudzidzokorora uye kudzivirira zvikanganiso. Wavy bob Rutivi rwekuparadzaniswa pamwe chete nepakati-kureba curls inobvumira kwete chete kurova… Ramba kuverenga Chikamu-chikamu dhizaini: 15 akanakisa nyeredzi mienzaniso
Kubheka makeup - maitiro ekudzokorora
[ad_1] Vizagist Christina Novikova - nezve sei (uye kana zvakakosha) kuti ubike iwe pachako uye ndezvipi zvigadzirwa zvinokodzera maumbirwo akadaro. Christina Novikova visagiste Chii chiri kubheka? Kubheka ndiko, kutanga kwezvose, gadziriro yekugadzira, iyo inoshandiswa mumafirimu, kumitambo uye pane yakatsvuka kapeti. Yakadai make-up inodiwa ne… Ramba kuverenga Kubheka makeup - maitiro ekudzokorora
Usadzokorora! 25 yakaipa njodzi masikirwo enguva dzese
[ad_1] DJennifer Lopez akauya kuma2002 Oscars aine trapeze, uye Kristen Stewart anogara achidenha vafotori nevatsoropodzi nevhudzi rake risina musoro. BeautyHack yaive neakawanda mafaro ekukurukura nyeredzi kutadza neyepamusoro stylist Ivan Anisimov. Ivan Anisimov pamusoro stylist mufananidzo agency Embassy yeChita Jennifer Lopez Pakutanga ndakafunga kuti mufananidzo wacho… Ramba kuverenga Usadzokorora! 25 yakaipa njodzi masikirwo enguva dzese
10 huru dzakashata runako kubva kuTV nhepfenyuro
[ad_1] TOovarious Maiza kubva munhepfenyuro yeTV "Clone", anonyengera Esmeralda anobva ku "Dream Coast" uye 8 mamwe mabasa asingakanganwiki evakaipa. Daniela Escobar (Maiza). Iwo akateedzana "Clone" Basa reMaiza anonyengera uye asingafare kwazvo ndiro rekutanga basa hombe remutambi panguva iyoyo Daniela Escobar. Hunhu hwakazoita seusina kujeka:… Ramba kuverenga 10 huru dzakashata runako kubva kuTV nhepfenyuro
Kuchinja kwakaita vatambi vane hutsinye
[ad_1] makore makumi maviri apfuura, musi waKurume 5, 1999, yechina uye inonyanya kufarirwa firimu inoenderana nhaurwa "Dangerous Liaisons" naChoderlos de Laclos yakaburitswa. Chiito chakatama kubva muzana ramakore rechi 18 kuenda kune rechi20, uye pachinzvimbo cheFrance, yakanaka New York yakaonekwa pazviratidziro. Paunenge uchironga kuona-zvekare Hutsinye Intentions, RunakoHack… Ramba kuverenga Kuchinja kwakaita vatambi vane hutsinye
Maitiro ekuchengeta ganda rako muchirimo: kuraira kubva kuna dermatologist
[ad_1] TTare kunyatso chengetedza uye kushandiswa kwezvinonakidza zvigadzirwa mumwaka unotonhora hazvivimbise kuti ganda rinotaridzika kunge risina mhosva nekutanga kwekudziya. Ndezvipi zvakavanzika zverunako zvinobatsira mukutarisira dzakasiyana ganda mhando uye nzira yekusarudza yakanaka chigadzirwa? Mhinduro dzemibvunzo iyi dzakatowanikwa kare… Ramba kuverenga Maitiro ekuchengeta ganda rako muchirimo: kuraira kubva kuna dermatologist
Nyeredzi makumi maviri dzisingawirirane
[ad_1] WITHShackles, zvinyengeri, kuferefetwa muHollywood zvakajairika. Sarudzo yeBeautyHack inosanganisira nyeredzi makumi maviri dzisingawanzo kuwana mutauro wakajairika. Madonna vs. Gwyneth Paltrow Iye mutambi anokunda Oscar uye pop mambokadzi anowanzo kutaurwa seshamwari dzakapika. Madonna naGwyneth vaive nehukama hushamwari kwenguva yakareba, vakatodaidza… Ramba kuverenga Nyeredzi makumi maviri dzisingawirirane
30 anonakidza runako memes
[ad_1] makumi matatu anonakidza runako memes [ad_30]
10 akanakisa madzimai emutungamiri wenguva dzese
[ad_1] Kubva kuvakadzi veFrance Brigitte Macron kune vakadzi vekutanga veAzerbaijan neCote d'Ivoire. Melania trump Yekupedzisira kubvunzurudza kwete mune chinzvimbo chemukadzi wekutanga, Melania akapa mu2016 kuAmerican GQ. Ipapo nyeredzi nenzira yekunyika yakagovana nhau kubva muhupenyu uye yakango "edza" chinzvimbo che… Ramba kuverenga 10 akanakisa madzimai emutungamiri wenguva dzese
5 nheyo huru dzeganda rakaoma
[ad_1] Tan on-line remedy based on lotus flower water, a BB cream with an excellent care effect and other discovery for dry skin - in a new article by the editor-in-chief of BeautyHack Karina Andreeva @ kandreevaa… Karina Andreeva Chief Mupepeti weBeautyHack Ndine ganda rinonamira kuoma, saka ndinosvika kusarudzo yenheyo… Ramba kuverenga 5 nheyo huru dzeganda rakaoma
Fairy tsiye: maitiro ekuita chimiro chakakwana
[ad_1] Vand runako Artist Kelly Baker anga achishanda muHollywood kwemakore gumi nemanomwe, uko musikana akafanira kunzi "ngano yetsiye." Mutero wake wevatengi unosanganisira iyo yose Kardashian-Jenner mhuri, Shay Mitchell, Cardi B, Zendaya, Ariana Grande, mutambi we Game of Thrones nedzimwe gumi nembiri nyeredzi. V Instagram Hupenyu hwaKelly ari… Ramba kuverenga Fairy tsiye: maitiro ekuita chimiro chakakwana
Wow! Mazuva ano vatambi vemitambo vairidza vana muBrazilian TV series vakaita sei?
[ad_1] V Mumakore ekuma1990, chiitiko chitsva chakaonekwa muhupenyu hwemhuri "yepashure peSoviet" - vachiona TV dzakateedzana. Mune idzodzo nguva dzisiri kure zvakadaro, dhisiki dzaive shoma - kuti uone kuti telenovela yaizopera sei, manheru ega ega waifanira kubvisa zvese nekugara pachiratidziri. Magamba e… Ramba kuverenga Wow! Mazuva ano vatambi vemitambo vairidza vana muBrazilian TV series vakaita sei?
maitiro andakaedza Achromin kwevhiki mbiri
[ad_1] NSRRangarira mukurumbira wekuchena kirimu mupinki uye beige kurongedza, uko kunogona kuonekwa mune yekugezera kweimwe Soviet uye post-Soviet furati? Kubva ipapo, iyo mhando yakavandudza nziyo dzayo, yakagadzirwazve uye yakaonekwa pamashefu ezvitoro mune yakagadziridzwa (mukati nekunze) vhezheni. BeautyHack mupepeti Yulia Kozoliy akarega zvaaigara… Ramba kuverenga maitiro andakaedza Achromin kwevhiki mbiri
nyeredzi dzakatikwenya sei musi waApril 1?
[ad_1] Kubva nepamuviri usati warambana: RunakoHack - nezve majee ezuro ezve nyeredzi, atakatombodavira. Justin Bieber Nezuro vaviri veBieber vakagovana nhau dzakanaka - Haley ari kutarisira mwana. Seumbowo, Justin akatumira ultrasound scan nemu "embryo": mumwe munhu akamhanyira kuzokorokotedza vaviri ava, vamwe vakapokana - zvinoita sei… Ramba kuverenga nyeredzi dzakatikwenya sei musi waApril 1?
8 Miss World vane inofadza mugumo
[ad_1] 8 Miss World ane anonakidza mugumo [ad_2]
6 kutara kukanganisa kwaunoita
[ad_1] KUNOGONA chii kushungurudzwa kwezvigadzirwa zvinogadzira kutungamira, sei kusarudza muzinga wakakodzera wekupenda uye nei bvudzi richida kubvumidzwa kutonhora? WELLA Nyanzvi yeNyika Igor Kimyashov - nezve zvikanganiso zvakajairika iwe zvaunoita kana uchigadzira vhudzi rako. Igor Kimyashov Nyanzvi yenyika WELLA Mistake # 1:… Ramba kuverenga 6 kutara kukanganisa kwaunoita
10 nyeredzi dzakazoita mukurumbira semwana
[ad_1] V Ndeipi firimu yakatambwa naAngelina Jolie aine makore matanhatu, Drew Barrymore akawana sei chinzvimbo chake chekutanga pazera remwedzi gumi nerimwe uye mune firimu rakakurumbira raunogona kuona mudiki Elijah Wood? Mukusarudzwa kwakasarudzika kweBeautyHack, kune nyeredzi dzakabuda paTV skrini achiri mudiki. Ramba kuverenga 10 nyeredzi dzakazoita mukurumbira semwana
Hapana dambudziko? 10 akanakisa vakaroorana vane hombe zera musiyano
[ad_1] RMusiyano mumakore gumi, makumi maviri uye kunyangwe muzana rezana ramakore hainetse nyeredzi idzi - zvinoratidza nemuenzaniso wavo kuti hapana zvipingamupinyi zverudo rwechokwadi. PaBeautyHack kune gumi akanakisa nyeredzi vakaroora kune avo zera risiri chipingaidzo. Nick Jonas uye Priyanka Chopra… Ramba kuverenga Hapana dambudziko? 10 akanakisa vakaroorana vane hombe zera musiyano
mauyire atakaita imwe yenzira dzinoshanda kwazvo dzekubvisa bvudzi
[ad_1] NSWinter, Laser, Ultrasonic, Photo-, Electro-… Muzana ramakumi maviri nemasere, izwi rekuti "epilation" rine misiyano mizhinji, uye tine nzira dzakasiyana siyana dzekubvisa bvudzi. Ikozvino zvinogona kuitwa kunyangwe pamba, uye pasina kurwadziwa, kuita kweganda uye mamwe matambudziko, uye zvakanyanya kukosha: kurota kwevasikana vese - kubvisa ... Ramba kuverenga mauyire atakaita imwe yenzira dzinoshanda kwazvo dzekubvisa bvudzi
Nyeredzi gumi dzakabatsirwa nekuvhiya kwepurasitiki
[ad_1] BElla Hadid, Megan Fox naBlake Lovely havana kubvira vazivisa pachena kuvhiya kwepurasitiki. Asi zvinozivikanwa kuti basa revasikana rakakwira kumusoro mushure mekuchinja kukuru muchitarisiko. Ndiani mumwe munhu angati "maita basa" kune vanovhiya epurasitiki - mune izvo zvinhu BeautyHack! Megan Fox Megan Fox anoramba chero kuvhiyiwa kwepurasitiki uye zvimwe… Ramba kuverenga Nyeredzi gumi dzakabatsirwa nekuvhiya kwepurasitiki
Maria Ginzburg naRasida Lakoba - nezve chirongwa chitsva The-Face-Only
[ad_1] NSW Sei uchitanga kushanyira anonatsa asi usingawani nguva? Kana iwe uri kutya vanachiremba mumarabhachi majasi nemajekiseni? Dhinda kutya kwako: chirongwa chitsva Iyo-kumeso-chete yakagadzirirwa iwe chete - avo vanoda kuchengetedza ganda ravo uye chengetedza nguva yavo. Pop-up fomati hazvireve zvinoshungurudza maitiro kana… Ramba kuverenga Maria Ginzburg naRasida Lakoba - nezve chirongwa chitsva The-Face-Only
5 runako maitiro kubva kuMoscow Fashoni Vhiki yatinoda
[ad_1] Mercedes-Benz Fashoni Svondo Russia inowanzo tevera mafashoni mavhiki muNew York, London, Milan neParis. Gore rino, vagadziri Yulia naAlisa Ruban, Alena Akhmadullina, Alexander Arutyunov vakapinda chiitiko chemafashoni. Isu takakwevera kune rwekunaka kwepasirese mafashoni, ayo akave akashandurwa zvakanaka paMoscow catwalks. Bvudzi nyoro rinoita Imwe ye… Ramba kuverenga 5 runako maitiro kubva kuMoscow Fashoni Vhiki yatinoda
zvakaitika kune vatori vechikamu vekutanga Russian chaiyo inoratidza
[ad_1] V Pakutanga kwema2000, fomati nyowani yakabuda paterevhizheni yeRussia - chaicho chiratidzo. Kazhinji, mamirioni evaoni veTV akadonhedza zvese nekuda kwechinyorwa chitsva che "Behind the Glass" kana "The Last Hero". Chii chakaitika kune nyeredzi dzeTV screen, uyo akavaka rudo pa… Ramba kuverenga zvakaitika kune vatori vechikamu vekutanga Russian chaiyo inoratidza
[ad_1] AParty rum, oiri yekufamba, akaneta makumbo pfapfaidza uye nezvimwe muunganidzwa wevhiki rino zvigadzirwa zvitsva. Bvudzi mafuta Tahiti Monoi, Alan Hadash Iyo Alan Khadash brand, iyo inosanganisa tsika dzeIsrael neazvino matekinoroji eGerman, yakaonekwa muRussia kwete kare kare, saka tinoda kukuyeuchidza nezve kuunganidzwa kwe… Ramba kuverenga Haugone kukanganwa kutenga? Wepamusoro gumi zvigadzirwa zvitsva zvevhiki
Sarudzo dzeVapepeti: Wepamusoro gumi Mist & Kumeso Kupfapfaidza
[ad_1] Vesna! Izvi zvinoreva kuti nguva yekushinga uye inorema zvinyorwa yapera. Zvipfapfaidzo nemhute yemhepo zvinotevera mumutsara. Vagadziri veBeautyHack vaedza "shamwari dzepamwoyo" yeganda rakasviba. Moisturizing lotion Glacial Spray Lotion, Skyn ​​Iceland Yakaedzwa nemukuru mupepeti BeautyHack Anastasia Speranskaya Kuchenjerera, kutarisa, vagari ve megalopolises (uye kwete chete)! Tsvaga… Ramba kuverenga Sarudzo dzeVapepeti: Wepamusoro gumi Mist & Kumeso Kupfapfaidza
Nyeredzi 'Sarudzo: Wepamusoro 12 zvinonhuwira
[ad_1] Hatalya Vodianova, Angelica Timanina, Maria Ivakova nedzimwe nyeredzi - nezvehwema hwavave vachidanana nawo kwemakore mazhinji! Sarudzo yemutepfenyuri weTV Maria Ivakova: Portrait YeMukadzi, Frederic Malle Ini ndinofunga inodziya inonaka Portrait YeMukadzi naFrederic Malle kuva siginecha yangu hwema - ndine… Ramba kuverenga Nyeredzi 'Sarudzo: Wepamusoro 12 zvinonhuwira
Iwo akanakisa akatorwa mazwi kubva kuchinamato TV nhevedzano yemakumi mapfumbamwe
[ad_1] V Mumavambo ekuma90s, kutarisa maTV manheru manheru yaive tsika mumhuri yega yega. Vamwe vavo vakamanikidzwa kuchema uye kunzwira tsitsi magamba, uye vamwe kuseka, vachigamuchira "mugove" wama endorphin muropa. Uye sezvo kuseka kunowedzera hupenyu, BeautyHack yakanyora akanakisa makotesheni ku… Ramba kuverenga Iwo akanakisa akatorwa mazwi kubva kuchinamato TV nhevedzano yemakumi mapfumbamwe
12 manicure mazano mumumvuri mukuru we2019
[ad_1] TOOral Living Coral yakaverengwa 16-1546 ndiro rakanyanya ruvara rwe2019 maererano nePatone Colour Institute. Mushure mezvinhu nezvezvakanaka zvigadzirwa mumumvuri wakajeka wemumvuri, tinoburitsa sarudzo dzemanicure uye salons, uko imwe neimwe yadzo inogona kudzokororwa zviri nyore! Kupi kuzviita: Runako saloni Inhype Runako ZoneAdress: Moscow, 1st Smolensky pa.,… Ramba kuverenga 12 manicure mazano mumumvuri mukuru we2019
7 emuchato makemikari maitiro evaroora muna 2019
[ad_1] HIndependent makeup makeup Yulia Kupriy (@kupryimakeup) akaudza kuti ndeapi miseve akakosha mumwaka wemuchato uyu, nei muroora wese achifanira kuve neanosimudza uye epingi miromo gloss muchikwama chake. Julia Kupriy Akazvimirira makeist mugadziri "Nechekare nhasi, vachati venguva yemberi vari kutarisa kumagazini vachitsvaga yavo yakakwana yemuchato makeup. Pastel mumvuri uye matte mavara ... Ramba kuverenga 7 emuchato makemikari maitiro evaroora muna 2019
Chii chakaitika kwavari? Idzo Ups uye Downs dzeBrazil Actresses
[ad_1] V 90 maBrazilian TV akateedzana aive ari pamusoro pekuzivikanwa kwavo. Avo vasina kufarira zvinoitwa nevatambi venhau kwemakore gumi nemashanu vachafara: ivo vanopinda mumamirioni emadhora emadhora zvibvumirano, vane vana uye vanoramba vachitamba. Kune nyeredzi pfumbamwe dzeterevhizheni dzine hupenyu hunonakidza kwazvo paBeautyHack.… Ramba kuverenga Chii chakaitika kwavari? Idzo Ups uye Downs dzeBrazil Actresses
6 kure-pasherufu mhando dzakachinja indasitiri
[ad_1] VEU iri kure nenzira chete yekumira muindasitiri yemafashoni. Kune mienzaniso apo, uchisvika pabutiro reAmerican Vogue, mamodheru anobuda pasi aine mamwe matambudziko akakomba senge rudzi. Vanenge vatanhatu vakashinga vasikana vane kujairika chitarisiko - mune chinyorwa Runako Hack. Beverly Johnson Beverly ndomumwe… Ramba kuverenga 6 kure-pasherufu mhando dzakachinja indasitiri
5 inofarira muviri uye bvudzi zvinonhuwira zvechirimo
[ad_1] VSpring muMoscow yakatosiyana uye haina fungidziro: kungave nekudziya kamwe kamwe kweinenge +10, mamiriro ekunze anodziya (ayo anopisa kunyangwe mune bhachi reganda) uye nezuva rakajeka, kana nechando chakapinza uye kusapisa pane thermometer mangwana acho. Saka kuti mamood ako asasvetuke, senge mamiriro ekunze,… Ramba kuverenga 5 inofarira muviri uye bvudzi zvinonhuwira zvechirimo
Nyeredzi gumi dzakachinja huwandu hwadzo kupfuura kuzivikanwa
[ad_1] TOHow Jessica Simpson akarasa makirogiramu makumi matatu, chii chakavanzika chekuenderana kwaVictoria Lopyreva uye chii chakabatsira Polina Gagarina kuonda? Vakakurumbira vakachinja huwandu hwavo kupfuura kuzivikanwa vari muunganidzwa weBeautyHack. Kureba kwaJessica Cypson Kukwirira kwaJessica kuri 30 cm, huremu hwakaenzana i161 kg. Simpson anowanzo neta uye akawana ... Ramba kuverenga Nyeredzi gumi dzakachinja huwandu hwadzo kupfuura kuzivikanwa
Nehanya! 22 stellar magadzirirwo ebvudzi anokuvadza bvudzi rako
[ad_1] Ndezvipi zvebvudzi uye dhizaini zvisingafanire kuitwa mazuva ese? Kubata nema stylists. Artak Hayrapetyan, stylist paBeauty Stop26: 1. MaCombs Musimboti wekukama ndewekumonera nemaune vhudzi kuti riwedzere. Asi nekuda kweizvi, chimiro chebvudzi chakangovhiringidzika: zviyero zvakapatsanurwa kubva kune mumwe nemumwe, se… Ramba kuverenga Nehanya! 22 stellar magadzirirwo ebvudzi anokuvadza bvudzi rako
Nyeredzi makumi maviri dzisina kumbokundikana runako
[ad_1] ZVINODZIDZISWA sei izvo nyeredzi zvinoshandisa zvakakwana dhizaini uye maitiro ekudzokorora maNatasha Poly ekugadzira kubva kune mutsvuku kapeti? Chikamu chechipiri chemashoko ndechevasikana vasina runako. Verenga yekutanga yekubatanidza. Aka account yepamutemo yaSienna Miller Sienna ine pikicha imwe chete, asi kune mamwe ma profiles zvachose… Ramba kuverenga Nyeredzi makumi maviri dzisina kumbokundikana runako
20 yakanakisa khusheni yechirimo
[ad_1] TOUungawana sei kuvhenekerwa kwakareruka uye ndeupi muto unovhara pasi peziso uye zvimwe zviratidzo zvekuneta? Makeup artists uye mablogiki vanotaura nezve maturusi avanoshandisa mukushanda uye hupenyu. Victoria Moiseeva Akazvimirira makemendi muimbi, blogger Cushion Air Fit, A'pieu Kufamba kwemakushoni kwakatanga neichi chiratidzo, uye panguva ino… Ramba kuverenga 20 yakanakisa khusheni yechirimo
20 inoyevedza lipstick shades ye blondes
[ad_1] Vizazhist Evgenia Rusinovskaya akaudza nzira yekuwana mumvuri wakakwana wemiromo, uye akagovana zvaaida zvigadzirwa zve blondes. Evgeniya Rusinovskaya Visagiste Paunenge uchisarudza iyo lipstick kara, pfuurira kubva parudzi rwemhando (inodziya kana inotonhora) uye mumvuri webvudzi. Makara ekudziya akakodzera kune vasikana vane blond inodziya; zvinotonhora, zve… Ramba kuverenga 20 inoyevedza lipstick shades ye blondes
12 Angelina Jolie magadzirirwo ebvudzi anoenderana nemunhu wese
[ad_1] BeautyHack yakasarudza bvudzi rakareruka uye rakashanduka kuita nyeredzi uye ndokumbira stylist Anna Portkova kuti ataure nezvavo. Anna Portkova Trichologist-chipangamazano Mabundles, vhoriyamu iri korona, offset kupatsanura, yakatsvedza musana bvudzi, bangs - Angelina's stylists vane akapusa maitiro. Zvese izvi zvinogona kuitirwa kumba, chero bedzi uine zvakafanana… Ramba kuverenga 12 Angelina Jolie magadzirirwo ebvudzi anoenderana nemunhu wese
Infrared sauna: makomborero uye zvinokuvadza
[ad_1] V Unogona kushandisa sauna infrared mune yemazuva ano nzvimbo yekusimbisa muviri kana yekunakira imba - inozivikanwa pakati pevanhu vanotarisira runako uye hutano. Magetsi mafungu ane maitiro akanaka, ayo anopinda zvakadzika mumuviri, achidziisa. Hamuna hunyoro mudumba, izvo zvinowedzera dikita uye kubvisa chepfu… Ramba kuverenga Infrared sauna: makomborero uye zvinokuvadza
4 nyowani nyowani yekushanyira
[ad_1] Ot runako nzvimbo, uko munhu wese anoziva nezve kumeso kwekuchengetwa kweganda, kune iyo nyowani chirongwa chepamusoro stylist Yegor Ryabushko. Iyo-Chiso-Chete chakagadzirwa nevasikana vaviri vakabatikana zvakanyanya: iye mugadziri weRasario brand Rasida Lakoba uye muvambi weWax & Go salon cheni Maria Ginzburg. Vane vana vanomwe kune vaviri. Naizvozvo,… Ramba kuverenga 4 nyowani nyowani yekushanyira
Simply penya: wongororo yezvakanakisa kupenya zvigadzirwa
[ad_1] RBeautyHack vapepeti vanoyedza akanakisa eyeshadows, anovhenekera, mapowder uye anopenya nekupenya kupenya uye kupenya kunoonekwa kubva muchadenga. Highlighter Skin Rudo Glow Glaze Stick, Becca Sarudzo yemukuru mupepeti weBeautyHack Anastasia Speranskaya Muna Kurume, Becca akapa musangano mutsva, Ganda Rerudo, iro rinosanganisira zvigadzirwa zvinonzi eco-zvine hushamwari. Iine zvese… Ramba kuverenga Simply penya: wongororo yezvakanakisa kupenya zvigadzirwa
maitiro andakaedza iyo Dermadrop maitiro
[ad_1] PASI nemupepeti mukuru weBeautyHack akaenda kukiriniki yezvinhu zvitsva cosmetology Gen87kuyedza maitiro eDermadrop. Ndiani akakodzera uye anogona kunzi isingarwadze analogue ye biorevitalization? Anastasia Speranskaya Senior Edhi RunakoHack Zuva riri kupisa, mhepo iri kuvhuvhuta, mabhatiri ari kuoma - kwete ganda rese rinogona… Ramba kuverenga maitiro andakaedza iyo Dermadrop maitiro
30 manicure sarudzo yeavo vasingade chipikiri art
[ad_1] Onti-yepasi yekupenda yakaneta, asi iwe hauna kugadzirira kudhirowa Sistine Chapel pazvipikiri zvako - zvinozivikanwa here? BeautyHack yaunganidza sarudzo dzenzara kune vanofarira minimalism uye vakaudzwa mune ma salons muMoscow anogona kudzokororwa. Ingotaridza tenzi! Kwokuzviita kupi: Runako salon Inhype… Ramba kuverenga 30 manicure sarudzo yeavo vasingade chipikiri art
Kuveura bvudzi: zvayakanakira nezvayakaipira
[ad_1] EI yako yekunyora mazuva ese yekudya nguva? Ita kuti igare kwenguva refu nekuveura bvudzi. Maitiro acho anogadzirisa vhoriyamu uye mac curls achishandisa yakasarudzika kuumbwa, vanyowani kana vanyengeri. Chibvumirano chinotora kubva pamasvondo matatu kusvika masere! RunakoHack - nezvezvakanaka nezvayakaipira kuveza bvudzi. Chii chinonzi kuveza bvudzi? Kuveza ndiko kugadzirwa kwe… Ramba kuverenga Kuveura bvudzi: zvayakanakira nezvayakaipira
Maitiro ekukurumidza kubvisa kutonhora pamiromo: rinopa zano kune dermatologist
[ad_1] HLT ngatitangei nenhau dzinoodza moyo: chete 4% yevagari venyika haina hutachiona hweherpes. Uye mukana wekuti iwe ndiwe wakasarudzika, kwete mutemo, hauna basa. Saka, mubvunzo wekubvisa kutonhora pamiromo unogona kuve wakakosha chero nguva. Dermato-cosmetologist Viktoria Britko akaudza sei… Ramba kuverenga Maitiro ekukurumidza kubvisa kutonhora pamiromo: rinopa zano kune dermatologist
zvazvinoita uye kupi kuzvidzokorora muMoscow
[ad_1] Zvishongedzo zvemhando yepamusoro, mumvuri unopenya waishandiswa nemaune zvisina hanya, kukwesha mukati uye zvekare zvehembe dzakashongedzwa nemifananidzo - manicurists kumafashoni show vakashandisa nzira dzese dzekutarisisa nzara dzemhando. Zvese izvi zvinogona kudzokororwa izvozvi muMoscow salons - mazano uye kero dzinobatsira mune iyo BeautyHack zvinhu! Scarlet shades Mune… Ramba kuverenga zvazvinoita uye kupi kuzvidzokorora muMoscow
5 zvigadzirwa zvemeso zvandaishandisa zvizere
[ad_1] RBeautyHack mupepeti Yulia Kozoliy - nezve mafuta, masiki uye emulsions yechiso chinomukwana zvakakwana uye, zvirinani, unofanirwa kutarisisa. Mafuta anonwisa mvura Botanical Kinetics Hydrating Soft Crème, Aveda handizvione semumwe wevateveri vakavimbika veAveda - hazvisi zvese zvigadzirwa zvinondikodzera, uye zvangu… Ramba kuverenga 5 zvigadzirwa zvemeso zvandaishandisa zvizere
zvese nezve kuvhiya kwepurasitiki muKorea
[ad_1] TOOreian epurasitiki vanovhiya vanoonekwa sevanonyanya kuziva pasirese. Zvinoenderana nehuwandu, mukadzi wega wega wechishanu muAsia anga aine kamwechete kosi yekuzora. Kuisa aesthetics pamutsetse wegungano, nyanzvi dzeKorea dzakagadzirisa hunyanzvi hwavo, vachikudza kufamba kwese. Parizvino, Korea yaita mabasa akawanda kwazvo pasi rose. Kurapa kwekushanya… Ramba kuverenga zvese nezve kuvhiya kwepurasitiki muKorea
Maitiro ekuziva yako mhando yerudzi uye zvakafanira here?
[ad_1] TOcolourist uye make-up artist - nezvekukosha kwakaita rudzi rwemavara izvozvi uye nei usingafanire kuvimba zvizere nehunhu uhwu paunenge uchisarudza zvekuzora kana kuda kuchinja bvudzi rako. Christina Novikova makeup artist, musiki weNovikova Studio yekugadzira chikoro Iye zvino kupatsanurwa kwechitarisiko maererano nemhando dzeruvara zvinoita kunge… Ramba kuverenga Maitiro ekuziva yako mhando yerudzi uye zvakafanira here?
Ndeapi mabloggi ari kutaura nezvazvo: Nastya Swan
[ad_1] Mdress uye blogger Nastya Swan - nezvetsika dzezuva nezuva dzerunako, kuwirirana kwemukati neako wega, chikafu nemitambo. Nezve hutano hwepfungwa Kuti ubudirire, zvakakosha kuti uchengetedze chiyero, chiyero chemukati uye chengetedza pfungwa dzako dzakarongeka. Maitiro emweya, kushanda nachiremba wepfungwa uye kutaurirana neangu zvemukati zvinondibatsira ku… Ramba kuverenga Ndeapi mabloggi ari kutaura nezvazvo: Nastya Swan
11 vakanakisa varatidziri veTV mumakore makumi maviri
[ad_1] Othey aigona nyore kuvaka modelling basa kwete zvakanyanya kupfuura zvaCindy Crawford, asi ivo vakasarudza terevhizheni studio kune iyo catwalk. Ekaterina Andreeva, Mona Abu Hamze uye vamwe vaterevhizheni vakanaka vepa9 mumakore gumi apfuura. Ekaterina Andreeva Tichitarisa kuna Catherine, zvinoita sekunge piritsi rekuchembera rakanga richiri… Ramba kuverenga 11 vakanakisa varatidziri veTV mumakore makumi maviri
10 akanakisa eBrazilian TV anoratidza ehudiki hwako
[ad_1] V Muna 1988, yekutanga TV yeBrazil nhepfenyuro "Muranda Izaura" yakaratidzwa muUSSR. Nyaya yerudo yaIzaura dos Santos naLeoncio Almeida yakateverwa nenyika yese yakakura. Mukutanga kwema80s, Susana Vieira, Vera Fischer, Antonio Fagundes nevamwe vatambi vakakurumbira vakave "nhengo" dzemhuri dzese mu… Ramba kuverenga 10 akanakisa eBrazilian TV anoratidza ehudiki hwako
Zvigadzirwa zvishanu zvetoni isina chaiko uye zvakafanana nazvo
[ad_1] RAnastasia Speranskaya, mukuru mupepeti weBeautyHack, akayedza primer inotsvedzerera, hwaro hune simba rinobwinya, inosimudza yakafanana negoridhe remvura, uye zvimwe zvigadzirwa zveganda rakakwana kune chero bhajeti. Primer Foundation yezvigadzirwa Touche atclat Blur Primer, Yves Saint Laurent Yeuka iko kutsetseka kwemugariro mune yakakurumbira photo editing app? With ichi primer… Ramba kuverenga Zvigadzirwa zvishanu zvetoni isina chaiko uye zvakafanana nazvo
iyo pefiyumu yakanakisa mukufamba-saizi fomati
[ad_1] Arum, yakavakirwa pamusiyano wakakura pakati pekotoni candy uye patchouli, yakapusa asi inoshanda amber ine viscous spruce resin uye donhwe remuto weorenji uye zvimwe zvinonhuwira zviri nyore kutora newe pazororo - tarisa mune idzva sarudzo pefiyumu mutsoropodzi Ksenia Golovanova. Zvinonhuwirira Bergamote &… Ramba kuverenga iyo pefiyumu yakanakisa mukufamba-saizi fomati
9 yakanyanya kujairika kumeso masiki
[ad_1] Vanozvidzora BeautyHack vakaswera zuva vakapfeka zvinonakidza, zvisingawanzo uye zvinonakidza kumeso kumeso. Isu tinotaura nezve zvatinoona - ndiani anozvida uye nei? Zviviri-zvinoumba bubble masiki yekuchenesa uye kunovaka iyo ganda Kaviri Dare, OMG! Korean masks Dhiviri Dare OMG! Vemabloggi vanochida - kune inoyevedza kupakata neiyo "yakamisikidzwa" mukadzi… Ramba kuverenga 9 yakanyanya kujairika kumeso masiki
15 hwema munhu wese anorota nezve
[ad_1] L Iyo inonhuwirira inoshamisa uye zvitsva zvezvinhu zvinosarudzika zvinonhuwira, kubva kwazvinotumbuka mweya mumweya, zviri muunganidzwa wakakosha weBeautyHack. Eau de parfum Rose Oud, Korloff Paris VaFrance vanoti: "Kupa Korloff kureurura rudo rwako." Uye hazvina basa kuti zvinorevei, chidimbu chekushongedza nekumwaya kwe… Ramba kuverenga 15 hwema munhu wese anorota nezve
Isu tinotaura uye tinoratidza: 15 runako novelties muna Kubvumbi
[ad_1] Tinotaura uye tinoratidza: gumi nemashanu matsva erunako muna Kubvumbi [ad_15]
nyeredzi dzaive "crumpets" muhudiki
[ad_1] V hudiki, aya akakurumbira "pyshechki" akamutsa rudo pakati pevamwe: o, iwo matama akatsvuka. Sezvo vakura, vakasarudza kuti yakanga yave nguva yekubvisa "mapanga" uye yochinja kuva runako runoshamisa. Vakakurumbira vaive chubby muhudiki hwavo - mumusanganiswa weBeautyHack. Jennifer Goodwin Vateereri vakadanana necutie… Ramba kuverenga nyeredzi dzaive "crumpets" muhudiki
15 vakadzi vakanaka kwazvo mune zvematongerwo enyika
[ad_1] Kubva kumukadzi wekutanga ane mukurumbira kuMiddle East kusvika kumutevedzeri wechikadzi akanaka kwazvo muBrazil. Mune chinyorwa cheBeautyHack - Mambokadzi Rania, Ivanka, Melania Trump uye vamwe vakadzi gumi nevaviri vanoita zvese zvese. Melania trump Asingazvizive, Melania akatanga basa rake rezvematongerwo enyika muna 12, paakaroora Donald Trump. A… Ramba kuverenga 15 vakadzi vakanaka kwazvo mune zvematongerwo enyika
Maitiro ekuzora zvinonhuwira nenzira kwayo?
[ad_1] NSA nzira inofadza haizosiyi vamwe vasina hanya, uye ichakupa kuzvivimba. Paunenge uchishandisa eau de chimbuzi, zvinofanirwa kuyeukwa kuti ruzha uye hurefu hwekunhuhwirira hunobatwa pamwechete neakawanda maficha. Icho chikuru ndechekushandisa kwayo pefiyumu kunhengo dzemuviri uye zvipfeko. RunakoHack nderwekuti sei… Ramba kuverenga Maitiro ekuzora zvinonhuwira nenzira kwayo?
5 zvigadzirwa zvigadzirwa zvauri kushandisa zvisizvo
[ad_1] TOSenia Wagner ari kutora bvunzo murunako pfungwa: vadzidzi vakanaka - vashanu, vadzidzi vanokundikana - kuti vadzokezve! 1) BB cream Iwe: ishandise kune base kunge toni. Chaizvoizvo, iyi haisi mhosva - uye hauzorangwa saRaskolnikov. Pane imwechete mamiriro: kana base iri yenguva dzose… Ramba kuverenga 5 zvigadzirwa zvigadzirwa zvauri kushandisa zvisizvo
zvikonzero zvausina kuziva nezvazvo
[ad_1] Magadzirirwo, makemikari epamba nezvimwe zvikonzero zvisingatarisirwe nei zvipikiri zvichipfutidza. Kushaikwa kwevhitamini Zvinokonzera zvipikiri zvakapatsanurwa zvinogona kunge zviri zvemukati nekunze. Muchindwe ndewokushomeka kwemavhitamini uye maelectronic: calcium, vitamini D, phosphorus, silicon, iron. Nekushayikwa kwavo, kwete chete zvipikiri zvinotambura, asiwo bvudzi neganda. Mu… Ramba kuverenga zvikonzero zvausina kuziva nezvazvo
Peppermint yakakosha oiri kune yakanaka bvudzi: inoshanda zvechokwadi here?
[ad_1] TOolumnist BeautyHack, muvambi wemasikirwo ezvisikwa (@ naturalal.ua) Vita Liasota akataura chikonzero nei mafuta epepermint akakosha achiwedzerwa kumakemikari ezvebvudzi uye kuti zvinonyatsobatsira here kuruka chirukwa muchiuno. “Mukugadzirwa kwezvizoro, tinowanzoshandisa peppermint yakakosha mafuta - taitova nekakwesha zvinoenderana nazvo. It… Ramba kuverenga Peppermint yakakosha oiri kune yakanaka bvudzi: inoshanda zvechokwadi here?
Wepamusoro 5 mafirimu erudo a2019
[ad_1] NSAShure kwezuva rinonetesa kubasa, unoda here kuzorora kuenda kumamodrama kana kukanda moyo wako nekutarisa bhaisikopo rerudo? Tinokukoka iwe kuti uzive nesarudzo yedu, iyo inosanganisira yakanakisa zvitsva zve2019. Kutanga kubva pakutanga Iyo firimu nyeredzi inonakidza Jennifer Lopez (verenga… Ramba kuverenga Wepamusoro 5 mafirimu erudo a2019
18 yakashongedzwa magadzirirwo ebvudzi refu
[ad_1] VVictorian zvinangwa, maGothic zvinhu uye rusununguko ruzere mukusarudza zvishongedzo! Mahombekombe akaomesesa Iyi irudo rweVictorian zvishoma idzo dziri nyore kududzira mumvere refu. Kana uine zvishongedzo zvakakura iwe usiri munzira nekuda kwekodhi yemapfekero kana zvaunofarira iwe, unogona kuzvigumira pakuoneka kana mabhendi akasununguka… Ramba kuverenga 18 yakashongedzwa magadzirirwo ebvudzi refu
Page 1 ... Page 44 Older mbiru
Hapana makomendi ekuratidza.